March 18, 2022 AdminLeaveaComment on पल शाह काण्ड टुंगो नलाग्दै साली भिनाजु काण्ड बाहिर्यो ? १८ बर्षिय सालीले ३३ बर्ष को भिना लाई गरिन यस
समयसमयमा चर्चामा आइरहने म-हि-ला अधि-का-रक-र्मी सावित्री सुवेदी चर्चामा । यो भन्दा पहिले पनि विभिन्न ब-या-न-का कारण चर्चामा आएकी उनी त्यसरी नै भा-इ-रल ।
उनले एक अन्तर वार्तामा आफु बा-बु वि-ना-को आमा बन्न चा-हे-को उल्लेख गरेकी छिन् । आफु अहिले तीस वर्षको भएको भन्दै अबको पाँच वर्ष पछि कुनै पुरुषसँ ग-यौ न स-’म्प-र्क गरेर ब-च्चा ज-न्मा-उ-ने योजना रहेको बताएकी हुन् ।
ईमान्दार अनि असल श्रीमानको खोजीमा छु
मलाई एकै चोटी दुइ जना संग गर्नु मन लागेको छ सम्पर्क नम्बर सहित !
अन्तत प्रचण्डले गरे ओलि सङ्ग फेरि पार्टि एकता घोषणा,निर्वाचनको बिसयमा देउवा प्रचण्डकाे चर्काचर्कि .